Portrait Mathilde | Grandir à Antsirabe
/PORTRAIT/ Niofana teto amin’ny fikambanana ary tanan’ankavanan’ny talen’ny fikambanana i Mathilde ary izao niverina eto izao indray telo taona taty aoriana ; tonga tamin’ny volana jona 2018. Izy no tale vaovaon’ny fikambanana Grandir Ailleurs ary tale lefitry ny federasiona Grandira. Andao hofantarina ny momba azy, amin’ny alalan’ny zavatra nataony, ny andraikiny ary ireo izay manintona azy.
Inona no nahatonga anao niverina ?
Misy fotoana ohatry ny hoe efa voalahatra daholo ny zavatra rehetra. Vao avy niala tamin’ny asako aho dia nahita ny tolotr’asan’ny fikambanana izay nifanaraka tamin’ny zavatra nandrasako. Mahahenika ahy ny fomba fiainako sy ny antony hiasako.
Inona ny zavatra tsapanao voalohany tamin’ianao tafaverina indray ?
Tao anatin’ny telo taona dia tena nivoatra be ny fandaharan’asa ara-tsosialy. Teo aho nadritra ny fananganana izany. Hitako amin’izao fa voasafidy tsara ireo mpisitraka ny tetik’asa, dia ny ankizy miaina eny an-dalambe fa tsy ny ankizin’ny lalana amin’ny ankapobeny ary hitako nisy fivoarana mazava tsara teo amin’ny maha matihanina. Ny hatsaran’ity atrik’asa ity no manome fahazotoana ho ahy.
Ianao no tohin’i Nathanaël, tale teo aloha izay nosoloinao ?
Mino aho fa tsy handà izy raha hiteny aho hoe ny asany talohan’ny hialany dia tsy nitovy tamin’ny voalohany. Ho hitako eo ny tohiny. Ny vina apetraka di arakaraky ny fivoaran’ny fikambanana. Na izany na tsy izany dia manohy ny asa efa nataony aho amin’ny fanohanana ara-teknikan’ny fikambanana Grandir à Antsirabe sy fitantanana ara-bola. Amin’ny jery lavitra dia hametraka ny asako amin’ny fampivoarana ireo mpiasa sy ny fandrindrana aho ary ihany koa amin’ny fitadiavana fidiram-bola.
Nahazo diplaoma tamin’ny fianarana ara-barotra ianao, nanaraka fiofanana teto amin’ny fikambanana teto Antsirabe tamin’ny fampivoarana ny tetik’asa mampidi-bola sy ny mpandraharaha ara-pizahantany Rencontre Avec Dago. Avy eo ianao nahazo asa voalohany ary niandraikitra ny fitantanana amin’ny fandraisana ireo mpanjifa tao amin’ny Leroy Merlin. Ahoana ny fihetse-ponao amin’ity asa mafy miandry anao amin’ny maha tale anao ity ?
Nahazo traik’efa betsaka aho teo amin’ny fitantanana sy ny fandaminana ny sorisory ara-tsaina. Niezaka ny nahafantatra ny tenako aho ary namantatra hoe amin’ny fomba ahoana no ahafahako mamoaka ny tsara indrindra avy amiko.
Vonona ho an’ity traik’efa vaovao ity ?
Tena vonona ! manana tanjaka aho, sy soso-kevitra tiako apetraka. Mahatoky ny tenako aho noho ireo traik’efa ananako ary efa matotra tsara aho ho an’ity asa ity.
Inona no tena nanamarika anao tamin’ny fandalovanao teto ?
Ny andro voalohany niverenako indray teto ampiasana. Tadidin’ireo mpiasa aho ary tena nampihetsi-po ahy manokana ny fandraisan’izy ireo izay feno hafanana foana.
Ahoana ny eritreritrao amin’ny hoavin’ny fikambanana ?
Betsaka ! voalohany dia ny fivelaran’ny ekipa ho any amin’ny matihanina hatrany, indrindra ny ekipan’ny fandaharan’asa ara-tsosialy. Mino aho fa afaka taona vity dia hahazo traik’efa ambony izahay momban’ny ankizy miaina eny an-dalambe. Ho azo antoka tokoa ny amin’ny fandraisana an-tanana tsara indrindra. Manome toky ahy ny fieretreretana fa ao aloha kely ao dia ho hainay amin’ny antsipirihany ny fandraisana an-tanana, izay tena sarotra, ary afaka manome azy ireo ny ho avy mamirapiratra. Faharoa, ho an’ny tetik’asan’ny federasiona dia mieritreritra aho ny mba ho lasa mahaleo tena tanteraka ary tsy miankin-doha amin’ny fitadiavam-bola intsony, vina izay mino aho fa ho tratra indray andro any !
Raha biby ianao ?
Misafidy ny « loutre » aho noho ny faharavoany, mahay miara-monina, mahafatifaty ary miaina ampahavitrihana. Mandany ny fotoanany any anaty rano izy ary manararaotra ny fiainany.
Ary raha zava-maniry ianao ?
« Coquelicot » no tonga ato an-tsaiko satria mipetraka ao an-tsaiko ny fitsiriny eny amin’ny toeram-piadiana rehefa vita ny ady. Tiako ny miteny hoe afaka teraka indray isika, ny zeziky ny fahasahiranana sy ny fahadisoana no mampitsiry voninkazo tsara.
Raha olona mahery fo ?
Zava-dehibe amiko ny misafidy vehivavy, ary i Furiosa no noeritreretiko, olona tsy tena izy ao amin’ny horonan-tsary Mad Max : fury road. Vehivavy mahery izay nifanandrina tamin’ny rafitra misy, tsy ny fitadiavana fahafahana ihany fa koa miaro ireo vehivavy namany izay merefo ary ihany koa ny olombelona mihitsy. Ao ambadik’izany hery izany dia misy faharefoana sy ratra izay mamelona io hery io.
Ary raha sakafo dia inona no safidinao ?
Nanapa-kevitra ny ho fangarona mofo mamy sôkôla mbola tsy masaka aho, tiako ilay mijery ny fianakaviana ao an-dakozia miara-mikarakara, manajoboka ny tanany ao antin’ny fangaro mba hanandrana. Mampiray hina, tsy mila vilia volamena no hihinanana azy. Tena tsara !
Ary raha fitaovana ?
Ondana no safidiko satria ho ahy dia manamarika zavatra iray hakana aina izy. Mandray ny tebitebitsika sy ny hafaliana nandritry ny tontolo andro izy. Eo amboniny ihany koa no teraka ny nofy.
Toetra tsara sy toetra ratsy ?
Tsy tena nahita aho (hehy). Hanihany tsara satria io no fitaovana voalohany hoentiko miasa, ary hanihany ratsy satria tsy tandritandriko. Indraindray ny olona tsy mahazo ny tiako tenenina.
Ary raha teny manan-danja ?
Ny safidiko dia ny fehezan-tenina mpanakanton’ny lalana avy ao amin’ny faritra misy ahy izay hitako matetika nanomboka tamin’ny fotoana nahafntarako fa ho aty Madagasikara aho nefa tsy noeritreretiko mihitsy : « Ny tsy nampoizina no fiainana »
Teny farany ho an’ny mpamaky ?
Ny tanjoko sy ny mampavitrika ahy hiasa dia ny hanome an’ireto ekipa izay mampiaiky ahy ireto ny enti-manana ara-bola, amin’ny maha-olona, ary ara-pitaovana mba ahafahan’izy ireo manatanteraka asa tsara. Tsy maintsy miady aho mba ahatratrarana ny tanjona.
Equipe	Portrait Elysé
FIHETSIKETSEHANA	Tatitra ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sp…